Ex Girlfriend’s Club (2015) - Myanmar Asian TV Channel
Korea Comedy romance ကြိုက်သူတွေအတွက်Ex Grilfriend’s Clubတဲ့ကားလေးပါ
2015မှာထွက်ရှိထားပြီး Song Ji Hyo နဲ့ Byun Yoo Han တို့က Main leaderတွေအဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ်
IMDb မှာလည်း 7.8/10ထိရထားပြီးတကယ်
Ji Hyo ပရိတ်သတ်တွေလည်းကြိုက်ကြမှာပါ 😍😍
ဘန်မြောင်ဆိုး(Byun Yo-Han)က နာမည်ကျော် webtoon စာရေးဆရာ….
သူ့webtoon seriesက သူနဲ့တွဲခဲ့တဲ့ ရည်းစားဟောင်း၃ယောက်အကြောင်းကိုရေးရာကနေ…
လူကြိုက်များလွန်းလို့ ရုပ်ရှင်ထုတ်ဖို့ လုပ်ရင်း ကင်ဆိုးဂျင်( Song Ji-Ho)နဲ့ပြန်ဆုံခဲ့ကြတယ်….
ကင်ဆိုးဂျင်က ရုပ်ရှင်companyက ထုတ်လုပ်သူ…
သူ့companyက မအောင်မြင်တော့ webtoon seriesကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ သဘောတူလိုက်ရာကနေ ဘန်မြောင်ဆိုးရဲ့ webtoon ဖြစ်နေမှန်းသိရရော…
ရုပ်ရှင်ထုတ်ဖို့လုပ်ကြရင်းမြောင်ဆိုးရဲ့ရည်းစားသုံးယောက်ဖြစ်တဲ့ နာဂျီအာ(Jang Ji-Eun) ,ဂျန်ဟွာယောင်း (Lee Yoon-Ji) နဲ့ လာရာ (HwaYuong)တို့ပြန်ပေါ်လာတဲ့
အခါမှာ ဘယ်လိုတွေ ရှုပ်ထွေးကုန်မလဲ……
ဆိုးဂျင်မှာလည်း companyကိုကယ်တင်ချင်လို့ မြောင်ဆိုးရဲ့ ရည်းစားဟောင်းတွေကို ဘယ်လိုသည်းခံရမလဲ…….
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဆိုးဂျင်အပေါ် ဘယ်လိုစိတ်တွေပြောင်းလဲသွားမလဲ….
ဘာပြသနာတွေကြုံရမလဲဆိုတာကိုတော့ ဟာသလေးနှောပြီး ကြည့်ရမှာမို့ အားပေးကြပါအုံးနော်
Translated by May Zun Aung
File size: over 400MB
Duration: 1hr 00min min
Starring: Byun Yo-han, Do Sang Woo, Kim Sa Kwon, Lee Yoon Ji, Ryu Hya Young, Shin Dong Mi, Song Ji Hyo,
20 Century Boy and Girl(2017)
2017 OctMBCရုပ်သံလိုင်းကနေထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ ကားလေးဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၃၂ပိုင်းပါဝင်ပါတယ် …. ❤❤❤လက်ရှိ သူငယ်ချင်းတွေ အပေါ် ဘယ်လို ဆက်ဆံသင့်လဲဆိုတာ သိရှိဖို့စေရင်တော့ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။❤❤❤❤ ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ၁၉၈၃ မှာမွေးဖွားတဲ့ သူငယ်ချင်း ၄ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ နဲ့ ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုတွေ ၊ သူတို့ ငယ်ဘဝတွေကို နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မိသားစု၊…